Finoana Anglikana: Tafajoro ny fiangonana ao Kaloara 15 taona aty aoriana
mardi, 01 octobre 2019 22:39
Tafajoro soamantsara ny Fiangonana Anglikana aty amin'ny zanabohitra Kaloara, 15 taona taorian'ny asa fitoriana filazantsara voalohany taty an-toerana. Vohitra iray anisany mamaritra ny Kaominina Imerimandroso i Kaloara, Distrikan’Ambatondrazaka.
« Vavolombelon’ny fisian'ny fiasan'Andriamanitra ny fitsanganana Fiangonana », hoy ny Mgr Samoela Jaona Ranarivelo, izay Evekan'ny Diosesin'Antananarivo sady filohan'ny Foiben'ny Eklesia Episkopaly Malagasy.
Ny Evanjelisitra avy eo anivon'ny finoana Anglikana no namaky lay voalohany ny fitoriana Filazantsara taty an-toerana. Ankehitriny tafajoro ny fiangonana ary efa manomboka miha miroborobo izany asa fitoriana ny filazantsara izany.